Ntinye na Nwepu nke mmemme na Windows 7
Mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmpụta, ọ bụghị ndị ọrụ niile na-elebara ntinye anya na iwepụ ihe omume, ụfọdụ n'ime ha amaghịkwa otú e si eme ya. Ma arụnyere na-ezighị ezi ma ọ bụ ngwanrọ arụnyere nwere ike imetụta ọrụ nke sistemụ arụmọrụ ma belata ndụ ya.
Nyocha Windows arụmọrụ Windows 7
Tulee ọsọ nke Windows 7, ị nwere ike iji nhazi ọrụ mmemme pụrụ iche. Ọ na-egosipụta ntule zuru ezu nke sistemụ arụmọrụ na ọkwa pụrụ iche, na-eme nhazi nke nhazi nghazi na ngwanrọ components. Na Windows 7, oke a nwere uru site na 1.0 ruo 7.9. Ọnụ ọgụgụ dị elu karị, ụlọ ọrụ kọmputa gị ka mma ma dịkwuo mma, nke dị oké mkpa mgbe ị na-arụ ọrụ dị arọ na mgbagwoju anya.
Adịnyela ngwa site na ụlọ ahịa Windows 8.1
Ndị ọrụ Windows 8 na 8.1 na-ezutekarị nsogbu dị iche iche mgbe ị na-agbalị ibudata na wụnye ngwa site na Windows 8.1 nchekwa, dịka ọmụmaatụ, ngwa ahụ anaghị ebudata ma dee ihe a jụrụ ma ọ bụ egbu oge, ọ naghị amalite na njehie dị iche iche na ihe ndị yiri ya. Na ntuziaka a - ụfọdụ n'ime ngwọta kachasị dị irè nke nwere ike inyere aka n'ọnọdụ nsogbu na njehie mgbe ị na-ebudata ngwa site na ụlọ ahịa ahụ (ọ bụghị naanị maka Windows 8.
Ọrụ ọdịyo anaghị arụ ọrụ - ihe ị ga-eme?
Nsogbu na playback ọdịyo na Windows 10, 8.1 ma ọ bụ Windows 7 bụ n'etiti ndị ọrụ kachasị. Otu n'ime nsogbu ndị a bụ ozi "Ọrụ ọdịyo adịghị arụ ọrụ" na, ya mere, enweghị ụda n'ime usoro ahụ. Akwụkwọ ntuziaka a na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe ị ga-eme n'ọnọdụ dị otú a iji dozie nsogbu ahụ na ụfọdụ nuances ndị ọzọ nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ụzọ dị mfe anaghị enyere aka.
Mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmpụta na ikpe pụrụ iche, ịkwesịrị ịgbanwe asụsụ nke interface ya. A pụghị ime nke a n'enweghị ntinye ederede kwesịrị ekwesị. Ka anyị mụta ụzọ isi gbanwee asụsụ na kọmputa na Windows 7. Gụọ kwa: Otu esi tinye mgbakọ asụsụ na Windows 10 Usoro ntọala Usoro nhazi maka ngwugwu asụsụ na Windows 7 nwere ike kewaa n'ime usoro atọ: Download; Ntinye; Ngwa.
Wụnye Windows 7 kama Windows 10
N'agbanyeghi na Microsoft eziputala usoro ohuru ohuru abuo, otutu ndi ozo na-acho ndi ozo "asaa" ma choo iji ya na komputa ha nile. Ọ bụrụ na e nwere nsogbu ole na ole na ntinye nke PC desktọọpụ nke onwe gị n'oge ntinye, ebe a na kọmpụta na "iri" ga-ebute ihu.
Windows paswọọdụ 10
Ọtụtụ ndị maara paswọọdụ dị na Android, ma ọ bụghị onye ọ bụla maara na na Windows 10 ị nwekwara ike itinye paswọọdụ dịka nke a, a pụkwara ime nke a na PC ma ọ bụ laptọọpụ, ọ bụghị naanị na mbadamba nkume ma ọ bụ ngwaọrụ ngebichi aka (ọ bụ ezie na, nke mbụ, ọrụ ahụ ga-adị mfe maka ngwaọrụ ndị dị otú ahụ). Onye nduzi nke onye a na-akọwa n'ụzọ zuru ezu otú e si melite paswọọdụ dị na Windows 10, ihe eji ya eme ihe dịka ya na ihe na-eme ma ọ bụrụ na ị chefuo paswọọdụ mara mma.
Foto kamera ekpuchi - esi edozi ya?
Nsogbu nkịtị na nkịtị maka ọtụtụ ndị ọrụ bụ ihu ala nke laptọọpụ laptọọpụ kamera (yana igwefoto kamera USB) na Skype na mmemme ndị ọzọ mgbe ha degharịrị Windows ma ọ bụ emelite ọ bụla ọkwọ ụgbọala. Tụlee otu esi dozie nsogbu a. N'okwu a, a ga-enye ngwọta atọ: site na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala, site na ịgbanwu ntọala nke kamera ahụ, nakwa ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla adịghị enyere aka - iji usoro nke atọ (Yabụ ọ bụrụ na ị gbalịrị ihe nile - ị nwere ike ịga n'ihu n'ụzọ nke atọ) .
Rịọ ikikere site na SYSTEM iji gbanwee igbe a ma ọ bụ faịlụ - otu esi edozi ya
Ọ bụrụ na ị na-eche eziokwu na mgbe ịhichapụ ma ọ bụ nyegharịa folda ma ọ bụ faịlụ na Windows 10, 8 ma ọ bụ Windows 7, ozi ahụ gosipụtara: Enweghị ohere na folda ahụ. Ịkwesịrị ka ị kwadoro ịrụ ọrụ a. Rịọ ikikere site na "System" iji gbanwee nchekwa a, ị nwere ike idozi ya ma mee ihe ndị dị mkpa na folda ma ọ bụ faịlụ, dị ka egosipụtara na ntuziaka a, gụnyere n'ikpeazụ ị ga-ahụ vidiyo na usoro niile.
Ejiri igbe kwadoro 100 percent na Windows 10
Otu n'ime nsogbu ndị a na - enwe na Windows 10 yiri ka ọ na - adịkarị karịa na nsụgharị mbụ nke OS - nkedo diski bụ 100% na Task Manager na, dị ka a rụpụtara, ọhụụ usoro mgbagwoju anya. Ọtụtụ mgbe, ndị a bụ naanị njehie nke usoro ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala, ọ bụghị ọrụ nke ihe ọjọọ, mana nhọrọ ndị ọzọ nwekwara ike. Nkuzi a na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe mere a ga-eji dọọ diski ike (HDD ma ọ bụ SSD) na Windows 10 ibu 100 percent na ihe ị ga-eme na nke a iji dozie nsogbu ahụ.
Esi ehichapụ faịlụ nwa oge Windows Windows
Mgbe usoro mmemme, egwuregwu, yana mgbe emelite usoro ahụ, ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na ihe ndị yiri ya, Windows 10 na-emepụta faịlụ nwa oge, ma ha anaghị adị mgbe niile ma ọ bụghị niile ehichapụ na-akpaghị aka. Na ntụziaka a maka ndị na-amalite, nzọụkwụ site na nzọụkwụ iji kpochapụ faịlụ nwa oge na Windows 10 na ngwaọrụ ndị a wuru n'ime usoro.
Ịmepụta mkpirisi na Windows desktọọpụ
Ụzọ dị mkpirikpi bụ obere faịlụ nke ihe onwunwe ya nwere ụzọ na ngwa, nchekwa ma ọ bụ akwụkwọ. Site n'enyemaka nke mkpirisi ị nwere ike ịmepụta mmemme, akwụkwọ ndekọ aha na ibe weebụ. Isiokwu a ga-ekwu banyere otu esi emepụta faịlụ dị otú ahụ. Ịmepụta ụzọ mkpirisi Na ọdịdị, enwere ụzọ abụọ dị mkpirikpi maka Windows - ndị na-emebu na ntinye lnk ma na-arụ ọrụ n'ime usoro ahụ, na faịlụ Intaneti na-eduga na ibe weebụ.
Idebe ekweisi na kọmputa na Windows 10
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahọrọ ijikọ ekweisi na kọmputa karịa ndị ọkà okwu, ọ dịkarịa ala maka ihe ndị dị mma ma ọ bụ ihe bara uru. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị ọrụ dị otú ahụ anaghị enwe obi ụtọ na mma olu dị na ụdị dị oke ọnụ - ọtụtụ mgbe nke a na - eme ma ọ bụrụ na echekwara ngwaọrụ ahụ n'ụzọ na - ezighi ezi ma ọ bụ na ha agaghị ahazi ma ọlị.
Anyị na-ejikọta onyunyo na kọmputa abụọ
Mkpa ọ dị iji PC abụọ nwere ike ibute na ọnọdụ ebe ike nke mbụ na-etinye aka na ọrụ - nsụgharị ma ọ bụ idekọta ọrụ. Kọmputa nke abụọ na nke a na-eme ọrụ ndị a na-eme kwa ụbọchị n'ụdị weebụ sọọfụ ma ọ bụ nkwadebe maka ihe ọhụrụ. N'isiokwu a anyị ga-ekwu banyere otu esi jikọọ kọmputa abụọ ma ọ bụ karịa na otu nyocha.
Ịmepụta ebe weghachite na Windows 8
Onye ọbụla ọ dịkarịa ala otu ugboro, ma ghaghị ịnagide nsogbu ndị siri ike na usoro. Maka ikpe ndị dị otú a, site n'oge ruo n'oge ịkwesịrị ịmepụta ebe ịmeghachi, n'ihi na ọ bụrụ na ihe na-ezighị ezi, ị nwere ike ịlaghachi azụ n'ikpeazụ. A na-eme ka ndabere na Windows 8 dị ka ọ na-akpaghị aka site na ịme mgbanwe ọ bụla na usoro ahụ, nakwa n'aka onye ọrụ.
Ndị ọrụ nke Windows 7 nwere ike ịchọta nsogbu, nke bụ na usoro rịọrọ ịbanye paswọọdụ netwọk. Ọnọdụ a na-emekarị mgbe ị na-eme ka ndị na-ebi akwụkwọ na netwọk nweta ohere, ma ndị ọzọ nwere ike ime. Anyị ga-aghọta otu esi eme ihe n'ọnọdụ a. Gbanyụọ ntinye aha paswọọdụ netwọk Iji nweta ngwa nbipute na netwọk, ị ga-aga na "ọrụ" Grid ma kesaa ngwa nbipute ahụ.
Esi chọpụta mgbe kọmputa gachara
Na afọ nke nkà mmụta sayensị, otu n'ime ọrụ kachasị mkpa maka mmadụ bụ nchekwa nke ozi. Kọmputa na-etinye nnọọ aka n'ime ndụ anyị na ha tụkwasịrị ihe kasị baa uru. Iji chekwaa data gị, okwuntughe dị iche iche, nkwenye, izo ya ezo na ụzọ ndị ọzọ nke nchedo ka echepụtara. Ma otu narị percent na-agba akaebe megide ohi ha enweghị ike inye onye ọ bụla.
Olee otú iji dozie njehie RPC Server na Windows XP
RPC na-enye ohere ka sistemụ arụ ọrụ dị iche iche na kọmputa ndị dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ngwaọrụ ngwaọrụ. Ọ bụrụ na arụ ọrụ nke RPC adịghịzi mma, mgbe ahụ, usoro ahụ nwere ike ịdaba ike iji ọrụ ndị a na-eji teknụzụ a eme ihe. Ọzọ, ka anyị kwuo banyere ihe kachasị akpata na ngwọta maka nsogbu.
Esi ejikọta PS3 gamepad na kọmputa
PlayStation3 gamepad na-ezo aka n'ụdị ngwaọrụ site na iji teknụzụ DirectInput, mgbe niile egwuregwu nke oge a na-aga nkwado PC naanị XInput. Iji mee ka ọhụụ abụọ ahụ gosipụta n'ụzọ ziri ezi na ngwa niile, a ghaghị ịhazi ya nke ọma. Ijikọ DualShock site na PS3 ka kọmputa DualShock na-akwado na-arụ ọrụ na igbe ahụ na Windows.
Fn igodo, nke dị na ala nke laptọọpụ laptọọpụ laptọọpụ, chọrọ ka a kpọọ ụdị abụọ nke igodo F1-F12. N'ime ụdị laptọọpụ kachasị ọhụrụ, ndị na-emepụta ihe amalitewanye ịme ka ọnọdụ F-key multimedia dị ka isi, na nzube ha bụ isi na-aga site na ụzọ ma na-achọ ịpị Fn n'otu oge.